Isitudiyo saseGallieni, eLa Châtre - I-Airbnb
Isitudiyo saseGallieni, eLa Châtre
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJonathan
I-studio ezimeleyo kwi-osteopathic practice, i-terrace egqunyiweyo, ingaphakathi yanamhlanje, ifikeleleke kubantu abanokunciphisa ukuhamba. Yonke intuthuzelo eyimfuneko yokuhlala okufutshane okanye okuphakathi.
Indawo yokupaka ezitalatweni yasimahla, ihlala ikhona.
Ifunyanwa, 400m ukusuka kumbindi wesixeko,-200m ukusuka kwiholo lali, imizuzu engama-40 ukusuka Châteauroux ne St Amand (Airport / A20, A71), iyure-1 ukusuka Bourges (Airport / A71) nemizuzu engama-20 ukusuka Lignières (lemidyarho), eGeorge Sand Museum , isiphaluka somdyarho.
I-studio entsha enokuthi ikwazi ukuhlala abantu abadala be-2 kunye nomntwana (ibhedi eyongezelelweyo) okanye abantu abadala be-3. Ifikeleleka kubantu abanokunyakaza okuncitshisiweyo kwaye inazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokuhlala okufutshane okanye okuphakathi). Ikwazimele ngokupheleleyo (ukufikelela ngaphandle, i-terrace egqunyiweyo).
4.90 · Izimvo eziyi-31
Ifakwe kwiimitha ezingama-400 ukusuka kumbindi wesixeko saseLa Châtre kunye neemitha ezingama-200 ukusuka kwiholo yelali. Le ndawo ithule kakhulu, kwaye kulula kakhulu ukupaka kude kufuphi nendawo yokuhlala.
Ndisebenza kwindawo, ukuze ndizenze ndifumaneke ukuba kuyimfuneko. Izitshixo ziqokelelwa kwisiza usebenzisa ibhokisi yekhowudi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Châtre